Dune dia efa manana sary famantarana vaovao taorian'ny resabe tamin'ny fiandohan'ny taona | Famoronana an-tserasera
Ny Dune Frank Herbert hiverina miaraka amin'i Warner Bros amin'ny sarimihetsika vaovao izay manantena ny hitondra ny tontolony manontolo amin'ny seho lehibe ary hiala amin'ny David Lynch, ilay marary. Ankehitriny Warner Bross dia nanambara ny sary famantarana vaovao an'i Dune.
Nilaza izahay fa tsy mandeha amin'ny laoniny satria tsy tianay, fa satria tsy lavitra ny refy lehibe izay an'i Herbert's Dune mihitsy. Manome bebe kokoa ary iray amin'ireo tontolon'olon-tokana izay misy mpanaraka maro kokoa namorona; mijery hatrany amin'ny fomba fijery ny famakiana ilay boky.
Ny sary famantarana vaovao an'ny Tonga i Dune miaraka amin'ny sary voalohany amin'ilay sarimihetsika ary aiza no misy an'i Timothée Chalamet ho Paul Atreides. Avy amin'ny kaonty Twitter an'ilay horonantsary no nisehoana ary nahatonga azy havaozina tao amin'ny media sosialy samihafa ananan'ilay horonantsary.
Dune nataon'i Denis Villeneuve pic.twitter.com/RjHtBV7MQ8
- Alvaro Fuentes (@alvarofuentesz) Janoary 30, 2020
Mampiasa ity logo ity ireo endrika "U" efatra amin'ny fironana samihafa izay hita tamin'ny sary voalohany tamin'ny fiandohan'ny taona. Raha ny marina, io logo voalohany io dia somary niteraka resabe satria toa "DUNC" kokoa noho ny "DUNE" izany. Ny mampihomehy momba azy dia ilay mpanafatra ilay sarimihetsika voalohany no nanao azy, ka ny zava-drehetra dia mijanona ho tantara an-tsary ho an'ny tantaran'ny sinema.
Notarihin'i Denis Villeneuve, mpitantana ny fiverenan'ny Blade Runner, antenaina hafahana manerantany izy amin'ny 18 Desambra; Raha mbola tsy manelingelina azy ny COVID-19 mahatsiravina izay manimba ny première sasany. Ny famintinana an'ilay horonantsary dia mitondra antsika any Atreides fa tsy maintsy mandeha any amin'ny planeta mampidi-doza indrindra eo amin'izao rehetra izao izy hiantohana ny ho avin'ny fianakaviany sy ny olony. Mijanona ho antsika ny mahita ny fomba hitondran'i Villeneuve ity tantara mahafinaritra ity amin'ny sinema ary mijanona eo anelanelany tahaka ny nataon'i David Lynch lehibe izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ity no sary famantarana Dune vaovao